Global Aawaj | लकडाउन : तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ? लकडाउन : तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ?
लकडाउन : तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ?
१२ चैत्र २०७६ 7:38 am
विश्‍वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अहिले नेपालमा लकडाउन लागू गरेको छ। नेपालमा सरकाले चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्मलाई लकडाउन गरेको हो।
यतिबेला मुलुकभरका स्कुल, कलेज र संघ संस्था बन्द छन्। लामो समय घरमै बस्नुपर्ने भएपछि धैरैजसोलाई मानसिक तनावले सताउन थालेको छ।कतिपय मानिस घरमै बस्नुपर्दाको पीडा सामाजिक संजालमा पोख्न थालेका छन्। कोही कस्तो समय आइलागेको भन्दै आफन्तसँग त्रास बाँडिरहेका छन्। यतिबेला सबैमा एकै किसिमको भय सृजना भएको छ कसरी बाँच्ने। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म विश्वभर ३ लाख ८२ हजार १२६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने १६ हजार ५६८ को जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालमा हालसम्म दुईजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। एकजनाको उपचारपछि संचो भएको अवस्था छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। कोरोना भारसबाट पीडित हुनेको संख्या ५ सय बढी पुगेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या १० पुगेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले चैत्र ९ गते १४ घन्टा जनता कर्फ्यू लगाएको थियो । मंगलबारबाट फेरी कर्फ्यू लगाएको छ।
यस्तो बेलामा देशका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ। आफूलाई स्वस्थ राख्न नियमित सरसफाईदेखि खानपानशैलीमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। तल केही टिप्स दिइएका छन्। यसले पनि तपाईको स्वास्थ ठीक राख्न केही मद्त गर्नेछ।
संगीत, पढाइ नियमित बनाउने :
यदि तपाईं यतिबेला घरमा एक्लै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आफूलाई एक्लो महशुस गरिरहनु भएको होला। यस्तो बेलामा तपाईले संगीत सुन्ने र किताब पढ्ने गर्नु भयो भने भने पक्कै पनि राहत मिल्नेछ । आफूलाई मनपर्ने कुनै पेन्टिङ पनि गर्नसक्नु हुन्छ।
नियमित शारीरिक व्यायाम गर्नुहोस् :
बिहान सबैरै उठ्नुहोस्। ताजा हावामा स्वतन्त्र रूपमा सास फेर्नुहोस। तपाईंको दिमाग सही दिशामा चल्नेछ । व्यायामले तनावलाई कम गर्दछ। घरको कम्पाउन्ड फराकिलो छ भने २०/२५ मिनेट जति हिड्ने गर्नुहोस्।
सन्तुलित खाना खानुहोस् :
भनिन्छ खानाको प्रकारले व्यक्तिको आनीबानी देखाउँछ। त्यसैले पौष्टिक खाना खानुहोस्। पानी र झोलिलो पर्दाथ प्रशस्त मात्रामा पिउनुहोस्। मन तातो पानीबाट दैनिकी सुरुवात गर्नुहोस्। बेलुकाको खानामा रोटी, साग,दूध खानुहोस्। राती सुत्दा मनतातो दूध वा मन पानी पिएर सुत्नुहोस्।
अनिदो नबस्ने :
जो निद्रामा सम्झौता गर्दछ उसको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्छ। निन्द्रा अभावका कारण कतिपय मानिस विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट ग्रसित छन्। यदि तपाईं राम्ररी सुत्नु हुन्छ भने त्यसले शरीरमा बेग्लै उर्जा दिन्छ। साथै, काम पनि ठीकसँग गर्न सकिन्छ।
परिवारसँग रमाउनुहोस् :
सधैं काममा व्यस्त भएकाहरुलाई यतिबेला एउटा संयोग जुरेको छ परिवारसँग बस्ने। यो अवसर हामीले चाहेर पनि कहिल्यै पाउँदैनौ। त्यसैले यतिबेला बाबु आमा छोराछोरी सबै सँगै मिलेर खाना पकाउने, सरसल्लाह गर्ने गर्नुपर्छ।यसो गर्दा आत्मियता बढ्नुको साथै तना पनि कम हुन्छ।-अन्नपूर्णपोस्ट